Waxyaabaha qurxinta: Dhagaxyada iyo dhagxaanta ku jirta quraaradda | Kalluunka
Waxyaabaha qurxinta: Dhagaxyada iyo dhagxaanta ku dhex yaal quraaradda quraaradda
ka walxaha qurxinta, sida dhagaxyada iyo dhagxaanta, waa inay noqdaan kuwo indhaha ka farxiya kuna habboon kalluunka.
Ujeeddada ayaa ah in la soo saaro jawi wanaagsan lagana fogaado in walxaha qurxinta aysan caqabad ku ahayn dhaqdhaqaaqa kalluunka. Waa inaanan ilaawin in walxaha ay tahay in lagu waafajiyo cabirka quraaradda iyo cabirka dadka deggan.
Dhagxaanta iyo dhagxaanta ku habboon aquarium-ka ee leh shaqooyinka qurxinta waxaan ka helnaa, ugu horreyntii, shingle, oo si caqligal ah oo sax ah loo adeegsaday loo adeegsaday si aad ah ayey isha ugu raaxaystaan ​​waxayna u dhaqmaan sida walxaha haynta.
Sidoo kale waa suurtagal in la isticmaalo qaybo ka mid ah dhagaxyada nooca siliceous kuwaas oo qayb ka ah buuraha meelaha qaarkood ee xeebta badda, maaddaama qaababkooda kaladuwan ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo godadka ay had iyo jeer soo bandhigaan ka dhiganayn qashin qub ah isla markaana aan metelin wax khatar ah oo kalluun.
ka dhagaxyada fulkaanahaAad bay caan u yihiin laakiin marka la eego sida ay u kala firidhsan yihiin waxaa macquul ah in wasakh ay ku soo ururto iyaga, taas oo lagu baabi'in doono si fudud adoo ka saaraya dhagaxa aquarium-ka oo ku nadiifinaya biyo.
Dhagxaanta iyo dhagxaanta leh macdanta sare ama kuraasta nuuradda waa in laga fogaadaa, maadaama kuwani ay gacan ka geysan doonaan wax ka beddelka dhexdhexaadnimada deegaanka biyaha.
Dhagaxyada kale ee lagu qurxiyo waxaa ka mid ah whetstone cas, fluorite, keymo salified, quartz, iyo schists. Sidoo kale waa suurtagal in la isku daro quruxda leh shaqeynta isku darka qaybaha, tan iyo inta ay u dhaqmayaan sida cunsuriyada, waxay aad ugu farxaan isha.
Markii dhagxaanta waaweyn lagu daro, waxaa lagugula talinayaa inay ku dul nastaan ​​dhagxaan yaryar si markaa uu u dhexeeyo meel u dhexeysa dhagaxa weyn iyo sagxadda aquarium-ka. Tani waxay fududeyn doontaa wareegga biyaha waxayna kaa caawin doontaa in laga hortago qashinka xad-dhaafka ah inuu uruursado, isagoo fududeynaya nadiifinta aquarium-ka.
Laguma talin in la isticmaalo maraakiibta badda kuwaas oo cidhifyada xunxun ay dhaawici karaan kalluunka, gaar ahaan kalluunka biyaha macaan ee aan loo baran joogitaanka cunsurradan ku nool deegaankooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » DIY Aquariums » Waxyaabaha qurxinta: Dhagaxyada iyo dhagxaanta ku dhex yaal quraaradda quraaradda
Halyeeygii Koi fish